Latsaka an-davaka lalina ny TOE-KARENA | 102 KARA
Latsaka an-davaka lalina ny TOE-KARENA
Ny krizy politika LAVARENY eto Madagasikara no nahalatsaka an-davaka lalina ny toe-karena. Ary vokatr’izany dia mitondra faisana ny vahoaka, indrindra moa fa ireo tena sahirana.
Talohan’ny krizy dia teo amin’ny 5% eo ho eo ny tahan’ny fisondrotry ny toe-karena. Raha izany taha izany no jerena dia tokony efa hisy fitomboany 20% io fisondrotry ny HARIM-PIRENENA FAOBE na ny P.I.B nadritry izao 4 taona sy tapany farany iainantsika izay.
Na dia eo aza anefa ny fitombon’ny fahantrana dia tsy mitsaha-mitombo ihany koa ny isan’ny mponina, satria raha ny teo anelanelan’ny 2008-2013 fotsiny no lazaina dia nitombo 3 tapitrisa ny vahoaka malagasy.
Koa ny fari-piainana tsy miakatra nefa mitombo ny mponina; mazava ho azy fa mihalalina hatrany ny fahasahiranana sy ny fahantrana.
Teo amin’io elanelam-potoana io ihany koa dia zara raha nisy 3000 ariary ny vola miditra isan’andro eo amin’ny mpiasa iray. Azo lazaina fa anisan’ny tany mahantra indrindra eran-tany isika amin’izany.
Manampy trotraka izany ihany koa ny fitombon’ny ankizy tsy tafiditra an-tsekoly izay nahatratra mihoatra ny 500 000.
–Mikasika ny fanampiana avy any ivelany kosa dia nisintona ohatra ny lelon-jaza hatramin’ny 2009 no mankaty. Ny fihenan’izany dia tonga hatrany amin’ny 40% mihintsy.
–Tsy azo nihodivirana ihany koa ireo loza voajanahary samihafa ( toy ny tondrano, ny rivo-doza sy ny sisa).
Tsy maintsy natrehina ireny fa tsy azo nodian-tsy hita velively.
–Araka ny filazan’ny FAO na ny sampan-draharahan’ny Firenena mikambana momba ny sakafo dia tandindomin-doza koa ny vokatra vary satria mety hihena hatrany amin’ny 60%.
Eto dia mbola ny krizy politika ihany koa no vato misakana ny tsy fahafaha-manao zavatra. Tsy afaka mivelatra na manitatra na manatsara ihany koa ny voly ataony mantsy ny tantsaha noho ny tsy fisian’ny vola sy ny fitaovana..
Fa ny tena vao maika MAMPAHANTRA antsika sy ny mampitotongana TOE-KARENA dia ny antsoina hoe MAUVAISE GOUVERNANCE na ny faharatsian’ny FITANTANANA ka mandeha amin’ny laoniny ohatra eo amin’ny fitrandrahana ny harem-pirenena. Manan-karena tokoa i Madagasikara saingy dia RATSY TANTANA ny fitrandraharaha izany na ny andra mena( bois de rose) izany ny voamboana, ny harena an-kibonn’ny tany, sy ny maro hafa.
Miditra amin’ny makarakara dia mivoaka amin’ny kiloadioaka fotsiny ny vokatry ny fitrandrahana isan-tsokajiny.
Raha aravina izany rehetra dia tsy vitan’ny hoe : » latsaka an-katerena fotsiny » ny toe-karena fa tena efa difotra mihintsy ao anaty lavaka mangitsokitsoka, dia tonga amin’ny hiran’ny Nanahary manao hoe : » MIVARALILA NY ISAN-TSOKAJINY dia ny VAHOAKA NO MIHINAN’NY…….TADINY.
1 juillet 2013 - 3 h 44 min Economie 1185 vues